आजको विनिमय दरः अमेरिकी डलर महँगो, कुन देशको कति ? « Today Khabar
आजको विनिमय दरः अमेरिकी डलर महँगो, कुन देशको कति ?
प्रकाशित १८ श्रावण २०७५, शुक्रबार ११:५४
काठमाण्डौँ , १८ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि तोकेको विनिमय दर अनुसार अमेरिकी डलर महँगो भएको छ । अमेरिकी १ डलरको खरिददर १ सय ९ रुपैयाँ ६३ पैसा छ भने बिक्रिदर १ सय १० रुपैयाँ २३ पैसा कामय भएको छ। पाउण्ड स्ट्रलिङ १ को खरिददर १ सय ४३ रुपैयाँ ५७ पैसा छ भने बिक्रीदर १ सय ४४ रुपैयाँ ३५ पैसा कायम छ।
जापानीज यन १० को खरिददर ९ रुपैयाँ ८३ पैसा रहेको छ भने बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ८९ पैसा कायम भएको छ। साउदी अरबियन रियाल १ को खरिददर २९ रुपैयाँ २३ पैसा छ भने बिक्रीदर २९ रुपैयाँ ३९ पैसा कायम भएको छ। कतारी रियाल १ को खरिददर ३० रुपैयाँ ११ पैसा छ भने बिक्रीदर ३० रुपैयाँ २७ पैसा रहेको छ।
संयुक्त अरब इमिरेट्स युएई दिह्राम १ को खरिददर २९ रुपैयाँ ८५ पैसा र बिक्रिदर ३० रुपैयाँ १ पैसा कायम भएको छ। मलेसियन रिङ्गेट १ को खरिददर २६ रुपैयाँ ९० पैसा छ भने बिक्रीदर २७ रुपैयाँ ४ पैसा कायम भएको छ।
युरोपियन लगायत केहीको राष्ट्रको भने विनिमयदर सस्तो भएको छ। युरोपियन युरो १ को खरिददर १ सय २७ रुपैयाँ ३५ पैसा छ भने बिक्रीदर १ सय २८ रुपैयाँ ५ पैसा छ। यस्तै अष्ट्रेलियन डलरको खरिददर ८० रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्रीदर ८१ रुपैयाँ २० पैसा कायम भएको छ। दक्षिण कोरियाको कोरियन वान १ सयको खरिददर ९ रुपैयाँ ७१ पैसा छ भने बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ७७ पैसा छ।
यसैगरी छिमेकी भारतसँग छिमेकी राष्ट्र भारतसँग भने स्थिर विनिमयदर रहेको छ। राष्ट्र बैंकले विनिमयदर तोकेपनि निजी बैंकले भने केही रकम महंगोमा बिक्री गर्ने छन्।
मधेश केन्द्रित दल सरकारसँग असन्तुष्टः राजपा र फोरम ओठे प्रतिक्रियामा सिमित
काठमाडौं । मधेसकेन्द्रित दुई दल संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी सरकारसँग असन्तुष्ट छन ।
काठमाडौँ : पुस १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोग बनाएर वाइड बडी घोटालाको अनुसन्धान गर्न पूर्वन्यायाधीश